ဝါဂွမ်းထည် catalog ပစ္စည်းကြိုးရေတွက်သိပ်သည်းဆမီးခိုးရောင် width ကိုဆေးဆိုး width ကိုစတိုင်လ်ကို C 32 * 32 68 * 68 47 "50" 63 "67" 43/44 "57/58" လွင်ပြင်ကို C 32 * 32 75 * 75 63 "57/58" လွင်ပြင် ကို C 30 ရက် * 30 ရက် 68 * 68 63 "57/58" လွင်ပြင်ကို C 21 * 21 60 * 60 63 "57/58" လွင်ပြင်ကို C 20 * 20 60 * 60 48 ", 63" 43/44 "57/58" လွင်ပြင်ကို C 40 * 40 133 * 72 47 ", 63" 43/44 "57/58" poplin JC 40 * 40 133 * 72 63 "57/58" poplin ကို C 40 * 40 133 * 72 67 "61/62" twill ကို C 40 * 40 133 * 100 ကို 63 "57/58" poplin ကို C 50 * 50 144 * 80 63 "57/58" poplin ကို C 60 * 60 140 * 140 63 "57/58" poplin ကို C 60 * 60 90 * 88 63 "57/58 "cambric JC 60 * 60 90 * 88 47", 63 "43/44" 57/58 "cambric ကို C 20 * 20 ကို 100 * 50 63" 57/58 "poplin
50% Cotton 50% polyester အထည်အလိပ်ရောင်း
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: 80/20 45 * 45 110 * 76 96 * 72 47 "/ 63" Fiber အမျိုးအစား: အဓိကအကျယ်: 47/48 "စံနမူနာ: ရိုးရိုးအသုံးပြုမှု: Spinning Feature ကို: Anti-တည်ငြိမ်သောအရောင်: မဆိုအရောင်ပစ္စည်း: 80% polyester 20% Cotton Craft: card ကို / Combded ဆောက်လုပ်ရေး: T-A / C 80/20 ချည်ခင်အရေအတွက်: 45s * 45s Density & အကျယ်: 110 * 76 96 * 72 47 "/ 63" လျှောက်လွှာ: အင်္ကျီ, Pocket & အထည်အလိပ်ယေဘုယျအား & Uniform သိသာသဘာဝတရားအနားသပ်: ပွန်းစားခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ပို့ကုန်စျေးကွက်များ : Global Production စွမ်းဆောင်ရည်: 1, 000 000mts Per လကို C 21/2 × 10 72 × 40 63 "1/1 ကို C 20 × 20 ကို 100 × 52 63" 1/1 ကို C 32/2 × 16 96 × 48 63 "1 / 1 ကို C 38/2 × 19 103 × 58 63 "1/1 ကို C 16 × 16 60 × 60 63" 1/1 ကို C 20 × 20 60 × 60 67 "1/1 ကို C 20 × 20 60 × 60 63" 1 / 1 ကို C အသက် 30 × 30, 68 × 68 63 "1/1 ကို C အသက် 30 × 30, 68 × 68 67" 1/1 ကို C (7 + 7) × (+77) 68 × 38 63 "1/1 ကို C (10+ 10) × (10 + 10) 72 × 40 63 "1/1 ကို C (16 + 16) × (12 + 12) 108 × 56 63" 1/1 ကို C (21 + 21) × (16 + 16) 128 × 56 63 "1/1 ကို C (21 + 21) × (10 + 10) 120 × 52 63" 1/1
specification ပုံနှိပ်ဖွဲ့စည်းမှုဝါဂွမ်းအလေးချိန် 260-320g အကျယ် 160-180cm
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 590 (17oz) မျိုးကိုရက်: လွင်ပြင်အကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်: 10 / 2x7 အကျယ်: 145 / 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုခြင်းကို: အယူနီဖောင်းန်ဆောင်မှုအင်္ဂါရပ်များအဘို့အဝတ်အစား: Flame ဟာနှောင့်နှေးစက်မှုခဝါချမှု Proban? မာခ် 340 EN531, EN533, EN1149-1, အရောင်များ: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အရောင်ကြာရှည်ခံမှုကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလက်မှတ်မှာရေဆေးစရာဘို့မီးလျှံ-နှောင့်နှေး * အနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%)
မိုးသည်းထန်စွာ panama ထည်ရောင်းချ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 320g / မီတာ? (9.4 အောင်စ) မျိုးကိုရက်: တစ်ဝက် panama အကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်:7+ 7x10 + 10 68x38 အကျယ်: 145 / 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုခြင်းကို: အယူနီဖောင်းများအတွက်အဝတ်အထည်နှင့်အိမ်ကအထည်အလိပ်န်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေ: စက်မှုခဝါချမှုအိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3% ) ကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံ 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အရောင်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအစွန်းအထင်းတွန်းလှန်လက်မှတ်မှာရေအဝတ်လျှော်များအတွက်: မာခ် 340 အရောင်များ: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
ဝက် panama ချည်ထည်ရောင်းချ
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 260g / မီတာ? (7.65oz) မျိုးကိုရက်: တစ်ဝက် panama အကြောင်းအရာ: 100% Cotton အကျယ်: 145 / 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုခြင်းကို: အယူနီဖောင်းများအတွက်အဝတ်အထည်နှင့်အိမ်ကအထည်အလိပ်န်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေ: စက်မှု 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာရေအဝတ်လျှော်များအတွက်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%) တာဝန် မာခ် 340 အရောင်များ: ကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအစွန်းအထင်းတွန်းလှန်လက်မှတ်အရောင်ကြာရှည်ခံမှုအရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
လဲမှို့ Twill ထည်ရောင်းချ - 360GSM
အထည်အလိပ်-အသေးစိတ်: အလေးချိန်: 360g / မီတာ? (10.6 အောင်စ) မျိုးကိုရက်: 3X1Twill အကြောင်းအရာ: 100% Cotton ချည်ခင်: 7x7 68x38 အကျယ်: 145 / 150cm ရည်ရွယ်အသုံးပြုမှု: 60 ° C တွင်ရေဆေးစရာစက်မှုတာဝန်အိမ်တွင်းအနိမ့်ကျုံ့မှုနှုန်း (သာ 3%): အဆိုပါယူနီဖောင်းန်ဆောင်မှုလက်တွေ့ features တွေအဘို့အဝတ်အစား အရောင်ကြာရှည်ခံမှုကိုက်ဖြတ်ဖို့အကြမ်းခံများနှင့်စက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလက်မှတ်: မာခ် 340 အရောင်များ: အရောင်ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဆက်သွယ်ပါ
ဆိုင်းအင်လုပ်ခြင်း အခမဲ့ join
နောက်ဆုံးရထုတ်ကုန်များ ဦးဆောင်လမ်းပြရောင်းချနေ နောက်ဆုံးရကုမ္ပဏီများ ဝယ်ယူရေးလိုအပ်ချက်များကိုထုတ်ဝေ
နောက်ဆုံးရဝယ်ကမ်းလှမ်းချက်များ Post ကိုကမ်းလှမ်းချက်များရောင်းချခြင်း သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတင်ရန်